အထွေထွေရောဂါများ Archives - Page 20 of 45 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဝနေတာလား ပွနေတာလား အရက်ယမကာပုံမှန်သောက်နေသူတွေကို ဗိုက်ကလေးပူပူလေးတွေနဲ့တွေ့ဖူးနေကြမှာပါ အရပ်ထဲမတော့ ဝနေတာမဟုတ်ဘူး ပွနေတာ ပြောသံတွေလည်း လူတိုင်းကြားဖူးနေကြပါ တချို့ဝတဲ့သူတွေလည်း ဗိုက်ကလေးပူပူလေးတွေနဲ့ မှ ခေတ်မှီမှာထင်နေကြတာလည်းရှိပါတယ် ဒါကြောင့် ဆရာက ဝနေတာလား ပွနေတာလား သေချာ ခွဲခြားတတ်ဖို့ ဒီစာကိုရေးသားလိုက်ပါတယ် ဒါမှ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေမဆုံးရှုံးရအောင်ဂရုစိုက်နိုင်မှာ…
? ဆယ်တန်း (သို့မဟုတ်) မအိပ်ဘဲ မက်ကြတဲ့ အနာဂါတ် အိပ်မက်လှလှလေးတွေ ? ကျောင်းဝင်းထဲကို အမောတကော ပြေးဝင်တော့ ခြေလှမ်းတွေက တစ်ခုခုဆွဲထားသလိုပဲ။ ပြေးလေ လေးလေ။ မောလိုက်တာ။ စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်တဲ့ထိ တဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေတဲ့ ရင်က မငြိမ်သေး။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ အချိန်တော်တော်လွန်နေပြီ။…
??နေကောင်းလား စားပြီးပြီလား ဘာနဲ့စားလဲ ?? လူတိုင်းပြေးမလွတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေ။ နေမကောင်းရင် ပြုစုပေးမလား မစားရသေးရင် ကျွေးမှာလားတော့ မသိ။ အလွယ်မေးတတ်ကြသလို ဖြေရတာလည်း လွယ်တယ်။ နေကောင်းလားမေးရင် အလွယ်တကူ ကောင်းပါတယ် ဖြေတတ်ကြပေမဲ့ တကယ်အပြည့်အဝကောင်းကြတာရော ဟုတ်ရဲ့လား။ ဖျားနာနေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ သွားလာလုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့ပဲ…
ဘီယာဗိုက်ပူပူလေးတွေ အကြောင်း ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဗိုက်ပူပူလုံးလုံးလေးတွေနဲ့ ဘီယာမောင်မယ်တွေကို မြင်ဖူးကြတယ်ဟုတ်။ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲကုန်တာတော့အမှန်ပဲ။ ယခင်ခေတ်များဆီက ညနေစောင်းရင်သူငယ်ချင်းတွေအပန်းဖြေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်တွေနေရာမှာ ဘီယာဆိုင်တွေအစားထိုးနေရာယူလာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုစာမကပေါ့။ ဗိုက်ပူလေးတွေဟာချစ်စရာကောင်းပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့ သိပ်မကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲကွယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဘီယာဗိုက်လေးတွေအကြောင်း အနည်းအကျဉ်းဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဘီယာသောက်တိုင်း ဗိုက်ပူသလား? တစ်ထစ်ချတော့မပြောနိုင်ပေမယ့်…
ဗီတာမင်စီ အကြောင်း ဘာတွေ သိထားလဲ ကျွန်တော် လူတော်တော် များများကို ဗီတာမင် စီ ကဘာအတွက်ကောင်းလဲ မေးရင် တော်တော်များများ ပြန်ဖြေတာကတော့ ဝိတ်ကျစေတယ်လို့ပဲ ဖြေတာများပါတယ်။ အခုထိ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ ဗီတာမင် C က ကိုလက်စထရော…
ယားလေကုတ်လေ ကုတ်လေယားလေ အရေပြားတွေယားတဲ့အခါ ယားယံခြင်းသက်သာအောင်ကုတ်ကြပါတယ်။ ကုတ်တဲ့ခနပဲသက်သာပြီး ပိုပိုယားလာတာဖြစ်ဘူးကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်မို့ ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာမသိချင်ကြဘူးလား။ အရင်ဦးဆုံး အရေပြားယားယံခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြပါမယ်။ ယားယံခြင်းဆိုတာ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ(ဥပမာအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာမတည့်တာတစ်ခုခု(သို့)ပိုးတစ်ကောင်ကောင်လာကပ်ပြီဆို အရေပြားကယားလာပြီး ကုတ်ခြင်းနဲ့ဖယ်ရှားခိုင်းတာပါ) ဟုတ်ပြီ ယားယံခြင်းဘယ်လိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာလေးပြောရအောင်။ လူ့အရေပြားမှာ ယားယံခြင်းအာရုံကိုလက်ခံပေးတဲ့…